I-Starbucks isungula iNethiwekhi yoLuntu | Martech Zone
Lwesine, Matshi 20, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ingcamango yam Starbucks ayikabikho ngoku ivukile! Ukubeka inethiwekhi yokuncokola ukuze ucele ingxelo kubathengi ngqo kwiivenkile abazigcinayo isenokungabi ngumbono ombi. Ukuba kukho uphawu lokuthengisa olunokuthi luphumelele kunxibelelwano lwasentlalweni, i-Starbucks kunokuba njalo. Luphawu olukhulu, kuyo yonke indawo, abantu banamakhoboka (ngokoqobo) kwimveliso yabo, kwaye abathengi bayayithanda.
I-Starbucks inyukele eludongeni. Baye baphulukana nobukhazikhazi babo nabalandeli, iindleko zokusebenza zinyukile, ii-baristas ezinkulu ziya kusiba nzima ukufumana, inkcitho yabathengi isala, kwaye abo bakhuphisana nabo njengoMcDonalds baqala ukukhuza malunga nokuphulukana nabaxhasi besidlo sakusasa. UMcDonalds wade wafaka i-Starbucks entloko ukuya kuvavanyo lwencasa yentloko.
Kutheni ndingekho kwi Starbucks rhoqo
Ngokwam, ndindwendwela i-Starbucks isiqingatha kakhulu njengoko bendiqhele ukwenza. Ndiyayonwabela i-premium roast endiyifumana kwindlu yekofu yasekhaya kwaye ndiyayixabisa inyani yokuba imali yam ibuyela kuqoqosho lwasekhaya. I-Starbucks yaphulukana nobukhazikhazi bayo xa ndiqala ukuyibona iibhloko ezimbalwa ngaphandle komnye kwaye i-wireless yayixabisa i-30 yeedola ngenyanga. Ndikwi Starbucks kuphela xa Indlu yeKofu yeGreenwood, Indebe yeembotyi ayifikeleleki.
kunye UWoward Schultz ubuyele kwisitulo somqhubi, Mhlawumbi i-Starbucks inokuma ithuba. Sobona. Uqikelelo lwam kukuba iNethiwekhi yeNtlalontle iya kuba nokugcwala kwetrafikhi, ngendikhethe ibhlog kwaye ndacela ingxelo ngomxholo endinokujolisa kuwo ngcono.
Luya kuba yintoni uluvo lwam ngeStarbucks? Izihlalo ezifanelekileyo.
Mar 20, 2008 ngo 6:50 PM
Ikofu enesidima ekunganyanzelekanga ukuba uye kugqirha ngesiqingatha seping yeemveliso zobisi ukuyiminxa iya kuba ngumbono wam weStarbucks.
Mar 20, 2008 ngo 6:52 PM
I-Pint, kunjalo. Ngenye imini ndiza kufunda ukucofa u-enter.
Mar 20, 2008 ngo 8:36 PM
Ndayeka ukusela i-Starbucks xa i-baristas yayiyeka ukujonga phezulu kuwe xa ithatha iodolo yakho kwaye ibuyisela utshintsho. Akukho nto idlula inkonzo yabathengi behlabathi, kwaye i-Starbucks iswele kakhulu kuyo. Uyazibuza ukuba oloqeqesho lwesiqingatha sosuku luncede na??
Mar 21, 2008 ngo-9: 39 AM
I-Starbucks iye yaba yiMcDonalds yekofu, ngokombono wam. Njengoko kukhankanyiwe ngu-Eric ngasentla, inkonzo yabathengi yehlile ngokwenene. Abasebenzi babonakala bengenamdla ngendlela abenza ngayo kwiindawo ezininzi zokutya okukhawulezayo, kwaye umgangatho wemveliso awuhambelani (nangona ndingatsho ukuba kwaMcDonalds kuyaguquguquka, hayi ukuba ndihlala nditya apho kwakhona). Baye bathatha into eyayikade ine-cache ethile kuyo kwaye yenza ukuba ibe yinto eqhelekileyo.
Ekukhuseleni kwabo, andiqinisekanga ukuba ungawugcina njani umda wenzuzo kwinqanaba elikhulu kwimarike njengokhuphiswano njengoko ikofu kule mihla. Ndicinga ukuba ngokugqunywa kwehlabathi ngeevenkile ze-Starbucks bekuya kubakho ilahleko kumgangatho opheleleyo wamava owafumanayo xa undwendwela, kodwa ngelishwa. Ndingathanda ukubabona bephucula izinto, kodwa ndicinga ukuba banomngeni onzima ezandleni zabo.
Mar 21, 2008 ngo-10: 15 AM
Andazi ukuba i-Starbucks idinga inethiwekhi yoluntu nangaphezu kokuba uBode Miller efuna ukukhulula i-SkiSpace skiing network social. Linani elikhulu labasebenzisi abenza isiphumo senethiwekhi kwaye benze inethiwekhi yoluntu ixabiseke, ke iisayithi ze-niche zizidubula ngokuzenzekelayo ezinyaweni. Ubuncinci, IMHO 😉
Mar 21, 2008 ngo-10: 48 AM
Ndicinga ukuba ndiyavumelana nawe, Dave. 'Ngexesha elifutshane', kubonakala ngathi bacela nje ingxelo kwaye ayisiyo 'nethwekhi yokuncokola' ngendlela eqhelekileyo. Kuya kuba mnandi ukubona ukuba baphumeza i-2 ephezulu - izihlalo ezingenazingcingo zasimahla kunye nezitofotofo.
Bobabini bagcina abaxhasi ixesha elide… into enokuthi ingaxatyiswa yindlu yokuvelisa ikofu eninzi. Awuthengisi ngaphezulu xa kungekho ndawo yokuhlala!
Mar 21, 2008 ngo-11: 03 AM
Siyibona le nto ngalo lonke ixesha andithi? Umbono omkhulu, imveliso ephumeleleyo kunye nenkampani, izikali zokuthatha ithuba lophawu olushushu ... kwaye emva koko iqale ukukhula njengokuphambana ngeemveliso ezongezelelweyo kunye neendawo kwaye iqala ukuphulukana nombindi wayo.
Ndisama ngeStarbucks yam yonke imihla kodwa iphulukene nesibheno sayo endleleni. Ndiyathanda ukuba u-Shultz ubuyile e-helm ... ukhumbuza ngemisebenzi ebuyela kwi-Apple ... kufuneka ibuyise kufutshane nokubonelela ngamava apholileyo. Unxibelelwano lwemidiya yoluntu luvula ubuncinane iingcango ngendlela entsha.
Umbono wam kubo iya kuba kukuphulaphula ngononophelo ngenxa yezizathu zokuba kutheni abathengi abakhoyo bengasezi, abanye baya eMcDonalds kwaye kutheni abantu beyifumanisa inzima kakhulu ukuba bayiqwalasele. Inye into endiyibeke apha phandle kukuba kufuneka bayeke i-nickle kwaye banciphise amava. Ndiyavuma malunga nokudibana ngaphandle kwamacingo. Ngapha koko, iimpendulo zilapha. Uphawu olunamandla kakhulu kubo ukuba bangafumani indlela yokululungisa.
Mar 21, 2008 ngo-11: 22 AM
Ndiyavuma Phil. Ndiyazibuza ukuba yimalini elahlekileyo ngenxa yokuba i-Starbucks ayinalo 'vumba lemoto entsha'?
Ukuba nefashoni sisiseko esibuthathaka kakhulu sokwakha ishishini lakho kwaye kuthanda ukufihla umbono wenkampani ngokwawo kunye nokubaluleka kwayo. Ndicinga ukuba uninzi lwempumelelo ye-Starbuck yayiyindlela yesiselo esipholileyo esinamagama amaninzi ngexabiso eliduru.
Mar 22, 2008 ngo-11: 03 AM
Ewe, imincili yale moto intsha iye yaphela. Ndikhumbula xa abantu babendihleka ngokuyeka nokusebenzisa ulwimi olutsha endilufundileyo.
Mhlawumbi uwubethele owona mba uphambili kubo ... ifashoni okanye usungulo oluhle lokuba ngabanini 'ngamava akusasa' aphulukene nendlela yawo. Ixesha liza kuxela.
Epreli 27, 2008 ngo-11: 13 PM
Ngelixa ndikwaqhwabela izandla ii-Starbucks ngokwenza inkqubo ezisa abathengi kwinkqubo yabo yokuvelisa izinto ezintsha, kukwakho nelinye icala ongalikhankanyanga. Abakhuphisana nabo, ukusuka kwiPeet's ukuya kwivenkile yekofu yekona emngxunyeni, banokufikelela kwingxoxo entsha ye-Starbucks. Lo nguvimba wezinto ezifunwa ngabathengi, yintoni ezanyiweyo, kwaye yintoni esebenzayo okanye engasebenziyo. Ukongeza, iStarbucks yenza umsebenzi omkhulu wokunxibelelana, ngaloo ndlela ibonelela ngophando lwasimahla lwentengiso.
Ndisayithanda into eyenziwe yi-Starbucks, kodwa ukuba bendingumdlali wexesha elincinci bendiza kujonga iibhodi zengcebiso yonke imihla!
Okungakumbi kwesi sihloko sikhethekileyo kwimbono yokugqwesa kweshishini ku: